Dhaddacha: Mohaammad Deeksisoo faa yeroo lammataaf wabiin akka gadhiifaman ajajame
1 year, 2 months ago 806 Qoodi
Manni Murtii Aanaa magaalaa Jimmaa dhaddacha guyyaa har'a Bitoteessa 07 bara 2013 ALI ooleen eebbifamtoota Yunivarsiitii Jimmaa kan turan Mohaammad Deeksisoo fi Mulugeetaa Shittoo akkasumas hojjetaa Yunivarsiiticha kan ta'an Dr Wandimmuu Laggasaa Abbaa Gaffaar wabii mataa isaaniitin akka gadi lakkifaman ajajeera.
Namoonni kun to'annoo jala kan oolan Guraandhala 07/2013 wayita sirna eebba barattoota Yunivarsiitii Jimmaa gaggeeffamaa ture irratti bakka Pireezdaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimalliis Abdiisaa fi Pirezdaantii Mana Murtii Waliigalaa Addee Ma'aazaa Ashannaafii argamanitti eebbifamtoota keessa tokko kan ta'e Mohaammad Deeksisoo waltajjiitti ba'ee dhaadannoo "Jawaar Mohaammad gadhiisaa, haqa Haacaaluu Hundeessaaf" jechuun erga dhageessise booda akka ta'e ni yaadatama. Achiin booda himata "hokkora kakaasuuf yaaluu" fi "qaama hidhate waliin hidhata qabaachuun" himatamanillee manni murtii wabiin akka bahan kan ajaje ta'uus poolisiin himata haaraa irratti dhiyeesse mana hidhaatti tursiise.
Mohaammad Deeksisoo dabalatee namoonni sadan duraan magaalaa Jimmaa waajjira poolisii aanaa 1ffaatti kan hidhamanii turan yoo ta'u, ajaja mana murtii kana booda waajjira poolisii aanaa 2ffaatti dabarfamanii akka haaraatti yakka haarawaan shakkamanii mana murtii dhiyaataniiru.
Mohaammad Deeksisoo fi namoota galmee isaa keessatti himataman lama Guraandhala 22/2013 osoo abukaatoon isaani hin beekiin mana murtii aanaatti dhiyaatanii turan. Yeroo mana murtiitti dhiyaatan Poolisiin 'yakka haleellaa boombii Onkololeessa bara 2013 magaalaa Jimmaa aanaa Bochoo Booreetti raawwatame lubbuu humna nageenyaa mootummaa tokko galaafate keessa harka qabu' jechuun himata haaraa irratti baneera. Manni Murtiis Poolisiin himatamtoota sadan mana hidhaatti tursiise akka qoratu eeyyameefi ture.
Haaluma beellama qabameen har'a Manni Murtii Aanaa magaalaa Jimmaa dhaddacha guyyaa har'a irratti eebbifamtoota Yunivarsiitii Jimmaa kan turan Mohaammad Deeksisoo fi Mulugeetaa Shittoo akkasumas hojjetaa Yunivarsiiticha kan ta'an Dr Wandimmuu Laggasaa Abbaa Gaffaar yeroo lammataaf wabiin akka gadi lakkifaman ajaja dabarseera.
Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa dhimma Mohaammad Deeksisoo ilaalchisee ibsa Guraandhala 17, 2013 ALI baaseen, naannoo Oromiyaatti Mohaammad Deeksisoo dabalatee hidhamtoota manni murtii mirga wabii eegeefi osoo hin gadhiifamiin mana hidhaa keessatti argaman hatattamaan akka gad lakkifaman hubachiise ture. KMNI ibsa baasee kana irratti Mohaammad yeroo jalqaba qabamu poolisootaan reebicha hamaa akka irra gahee ibseera.
Dhaddacha Yunivarsiitii Jimmaa Mohaammad Deeksisoo
March 18, 2021, 8:59 a.m.
"Mohaammad Deeksisoo fi namoota isa waliin himataman hatattamaan gadi lakkifamu qabu" - KMNI
March 4, 2021, 1:05 p.m.
Mohaammad Deeksisoo faa himata haaraa "haleellaa boombii raawwachu" jedhuun himataman
Feb. 23, 2021, 7:17 a.m.
Barataan Yunavarsiitii Jimmaa ''Jawaar Mohaammad hiikaa'' jedhe maaliin shakkame?